Bogga ugu weyn Sida Lacag Loogu Sameeyo Hoos U Dhac | 15 Siyaabo Hubaal ah 2022
Dad badan, oo badankoodu ka maqlay erayada hoos -u -dhac dhaqaale meelo badan, erayga ayaa lala xiriiriyay waxyaabo badan, nuglaansho, lumis, iyo xaalado aad u daran, saboolnimo. Qofna ma rabo inuu faqiir noqdo, laakiin aad u yar ayaa ka fekeraya sidii lacag looga samayn lahaa hoos -u -dhac dhaqaale.
Waxaa jira dabcan sababo wanaagsan oo ay tahay inaad ka welwesho. Jilicsanaantu ma fiicna, gaar ahaan marka aysan ku koobnayn hal qof ama koox. Tani waxay khuseysaa dhaqaalaha waddamada iyo dalal kale iyo waddammada qaran ee ku tiirsan iyaga si ay u noolaadaan.
In kasta oo aan ka soo horjeedno fikradda dhacdooyinka sidan oo kale ah, way dhacaan oo badanaana digniin la'aan. Curiye, aqoonyahan, iyo xisaabiye Nassim Nicholas Taleb wuxuu caan ku yahay ka hadalka laba fikradood oo kala ah “swans black” iyo “anti-fragility.”
In kasta oo laga yaabo inaanan awoodin inaan saadaalinno dhacdooyinka guumaysiga madow oo aan ka dhigi karno dhaqaalaha hoos-u-dhac ama ka-hor-tag, haddana waxaan ku dadaali karnaa inaan u diyaarinno oo hore u sii qorsheynno. Si loo siiyo akhristayaasha faham aasaasi ah, fikradaha qaarkood ayaa si kooban looga hadli doonaa maqaalkan.
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa dib -u -dhaca, saamaynta ay leedahay dib -u -dhaca, iyo sida lacag looga sameeyo hoos -u -dhac dhaqaale. Sii akhri.
Waxaa jiray dib -u -dhacyo iyo mid ka mid ah 2021 ama sannadaha soo socda ma noqon doono kan ugu horreeya ama kan ugu dambeeya. Inta lagu jiro fasaxyada, dalalku way yaraadaan sababtuna waa awood -darradooda inay mar kale sii wadaan qaybo ka mid ah dhaqaalahooda. Waxyaalaha waaweyni wax yar bay bilaabmaan oo Niyad -jabkii Weynaa ee 1930kii ayaa caddayn u ah taas.
Sida laga soo xigtay history.com "Ah Depression Great waxay ahayd hoos -u -dhaca dhaqaale ee ugu xumaa taariikhda dunida warshadaha leh, oo soo jirtay 1929kii ilaa 1939. Waxay bilaabatay ka dib shilkii suuqa saamiyada Oktoobar 1929, kaas oo Wall Street ku riday argagax oo tirtiray malaayiin maalgashadeyaal ah.
Dhowrkii sano ee soo socda, kharashaadkii macaamilka iyo maalgashiga ayaa hoos u dhacay, taas oo sababtay hoos u dhac aad u weyn oo ku yimid wax soo saarka warshadaha iyo shaqaalaynta iyada oo shirkadihii fashilmay shaqaalihii shaqada laga joojiyay. Sannadkii 1933 -kii, markii Niyad -jabkii Weyn uu gaadhay meeshii ugu hoosaysay, ilaa 15 milyan oo Maraykan ah ayaa shaqo la’aan ahaa oo ku dhawaad ​​kala -badh baankii waddanka ayaa fashilmay. ”
Haddii aad taas akhrido, waxaad ogaan lahayd inay si dhakhso ah u xumaan karto. Rajadu ma aha in la dhiirrigeliyo cabsida laakiin waa in la abuuro heerka cabbir habboon oo wacyigelin ah oo kaa ilaalinaya inaad la kulanto argagaxyo aan loo baahnayn oo kaa dhigaya inaad barato sida lacag loo sameeyo inta lagu jiro dib -u -dhaca si aad uga gudubto maalmaha xun.
Markaa haddii uu madaxweynuhu ku dhawaaqo, sida Maraykanka oo kale, in aanay waxba soconayn, laakiin ay weli jiri doonto lacag la sii daayo ama dammaanad -qaad, wax yar bay kuu qabanaysaa, marka laga reebo inaad taajir tahay. Taas oo haddii ay dhacdo, nasiib wacan kuu ah, waxaad taagan tahay fursad caddaalad ah oo aad ku badbaadi karto in ka badan 70% dadka ku socda meeraha.
Maqaal ay qortay Hooyo Jones oo cinwaan looga dhigay “Bailout is Working - for the Rich” ayaa sheegaysa in “dhaqaaluhu uu ku jiro dayr lacag la’aan ah laakiin Wall Street ayaa kobcaya, kaydka shirkadaha waaweyn ee gaarka loo leeyahay ayaa aad sare ugu kacaya.”
Markaa haddii aadan ku dhicin saamiyada mega ee Wall Street, waxaa fiican inaad akhrido si aad u ogaato siyaabo aad lacag uga samaysan karto hoos u dhac halka kuwa kale ay luminayaan.
Waa maxay hoos u dhac?
Hoos -u -dhacu waa hoos u dhac weyn oo ku yimaad dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha oo soconaya bilo ama xitaa sanado. Khubaradu waxay ku dhawaaqaan hoos -u -dhac marka dhaqaalaha ummaddu la kulmo waxsoosaarka guud ee gudaha (GDP), heerka shaqo -la’aanta oo sii kordheysa, iibinta tafaariiqda oo hoos u dhacda, iyo qandaraasyada qandaraasyada dakhliga iyo wax -soo -saarka muddo dheer.
Haddii dhaqaaluhu ku jiro hoos -u -dhac, kicinta dhaqaale sida dhimista qiimaha Fed iyo dib -u -soo -celinta cashuurta ayaa la bixin karaa iyada oo aan laga welwelin wax badan oo ku saabsan sicir -bararka, maadaama hoos -u -dhacu had iyo jeer dilo sicir -bararka.
Waa tan sababta: sababta oo ah dadku waxay haystaan ​​lacag yar oo ay ku kharash gareeyaan, ganacsiyadu si sahal ah uma kicin karaan sicirka, gaar ahaan haddii macaamiisha lagu qasbo inay xitaa wax badan ku bixiyaan cuntada iyo tamarta.
Farqiga u dhexeeya hoos -u -dhac iyo niyad -jab?
Inta lagu jiro hoos -u -dhac, kobaca wax -soo -saarka ayaa hoos u dhacaya dhowr meelood hal sano gudaheed ka hor inta uusan noqon mid taban sidoo kale waxaa jira hoos u dhac weyn oo tilmaamayaasha dhaqaalaha ee muhiimka ah sida dakhliga, shaqada, wax soo saarka, iyo iibinta tafaariiqda.
Murugadu waxay socotaa sannado ee ma aha afar meelood, muddadaasna, GDP -gu waa taban yahay in ka badan kala bar sannadahaas.
Niyad -jabka, waxaa jira hoos -u -dhac iyo joogteyn ku timaada tilmaamayaasha dhaqaalaha badan iyadoo wax -soo -saarka dhaqaaluhu uu aad hoos ugu dhaco. Saamaynta niyad -jabka ayaa la dareemayaa tobanaan sano kadib.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya hoos -u -dhac iyo niyad -jabka ayaa ah in hoos -u -dhac uu yahay marxalad meertada meheradda oo uu jiro foosha. Fooshaan ayaa la filayaa marka marka dhaqdhaqaaqyada ganacsigu ay ugu sarreeyaan, inay wax dhacaan.
Halka niyad -jabka uu yahay muddo dheer oo hoos -u -dhac dhaqaale. Niyad -jabka ayaa ka dheer oo aad uga sii daran burburkii sanado badan ee hoos u dhac dhaqaale.
Madowyada madow iyo ka -hortagga uurka?
Nassim Taleb ayaa sharxaya a madow madow sida “dhacdo leh saddexda sifo ee soo socda. Marka hore, waa mid ka baxsan, maaddaama ay ku jirto meel ka baxsan rajooyinka joogtada ah maxaa yeelay wax hore u jiray oo si qancin leh u tilmaami kara suurtagalnimadiisa.
Midda labaad, waxay leedahay saamayn aad u daran…. Seddexaad, in kasta oo ay xaaladdu ka sii darnayd, haddana dabeecadda bini -aadamku waxay naga dhigaysaa sharraxaad isku dhafan oo ku saabsan dhacdadeeda xaqiiqda ka dib, taasoo ka dhigaysa mid la sharrixi karo oo la saadaalin karo. ”
Isaga oo sidoo kale adeegsanaya fahamka waxa ay yihiin guumaysiga madow, wuxuu ku tilmaamay ka -hortagga uur -ku -taallada “ka -faa'iideysiga khalkhalka.”
Wuxuu sharxayaa in “Waxyaalaha qaarkood ay ka faa'iidaystaan ​​naxdinta; way barwaaqoobaan oo weynaadaan marka ay la kulmaan isbeddel la'aan, kala -sooc la'aan, khalkhal, iyo walbahaar iyo jaceyl jacayl, halis, iyo hubsiimo la'aan ... Kan adkaysta wuxuu ka hortagaa naxdinta oo sidiisa ayuu ahaadaa; antifragile -ku wuu fiicnaanayaa. ”
Awooddaada inaad noqoto mid ka -hor -tagga inta lagu jiro hoos -u -dhac dhaqaale ayaa ah waxa laga hadlayo.
Waa maxay suuqa saamiyada hoos u dhaca?
Si aad u fahanto waxa uu yahay suuqa saamiyada hoos u dhaca, waxaad u baahan tahay inaad fahanto waxa dhaca mar kasta oo ruxruxo suuqa saamiyada. Suuqa ayaa si xun uga jawaaba iyagoo ka tagaya wax kasta oo ay u qaadan karaan inay halis yihiin, gaar ahaan inta lagu jiro hoos u dhac dhaqaale.
Inta lagu jiro fasaxyada, maalgashadayaashu waxay u muuqdaan inay iibiyaan harooyinka halista ah waxayna u gudbaan dammaanad badbaado leh, sida deynta dowladda. Tani waa sababta oo ah dib -u -dhacyadu waxay u horseedaan ka -fogaanshaha halista sare ee dhinaca maalgashadayaasha, kuwaas oo u orda dabool markay arkaan halista aysan u baahnayn.
Suuqa saamiyada hoos u dhacu waa suuq la heli karo marka kuwa doonaya in ay ka fogaadaan halista ay iibiyaan saamiyadooda suuqa qaarna ay iibsadaan. Tani waxay noqon kartaa wax wanaagsan ama wax xun, waxay kuxirantahay qofka wax weydiinaya.
Waxa wanaagsan ee ku saabsan dib -u -dhacyada ayaa ah inay had iyo jeer u oggolaadaan soo -kabashada goor dhow ama goor dambe. Fahamkaas ku gal suuqa hoos u dhaca.
Maxay ka dhigan tahay caddayn dhaqaale -xumo?
Inaad noqoto mid dib u dhac ku ah caddayn waa inaad isu diyaariso inaadan dib u noqon marka saamaynta hoos u dhacu ay bilawdo inay aad qaniinto dadka.
Sida Yuusufkii kitaabiga ahaa intii lagu jiray abaartii weyneyd ee Masar, oo horay u sii arkay macaluusha sannadaha soo socda oo diyaargarow ku filan u samaysay sannadahaas, si loo noqdo dib-u-dhicid waa inay noqoto sidii Yuusuf oo kale.
In kasta oo laga yaabo inaadan awoodin inaad joojiso hoos -u -dhac dhaqaale oo dhaca, waxaad diyaarin kartaa doonnidaada si xun loo ruxruxo iyada oo aan loo eegin inta uu hoos -u -dhacu socdo.
Shaqada, noqo mid aad u qiimo badan. Haddii ay hoos u dhacdo oo shaqaalihii shaqada laga joojiyo, adiga kuma saameyneyso. Waxa kale oo aad ka shaqayn kartaa samaynta resumeygaaga mid cusub oo aad ku hagaajiso xirfadahaaga si aad ugu habboonaato xitaa doorar waaweyn.
Gurigaaga, ku bilow inaad hoos u dhigto kharashaadka guriga, yareyso keydinta deg -degga ah adigoo kor u qaadaya, iibiya waxyaabo aadan u baahnayn, una diyaar garow inaad caawiso xubnaha qoyskaas.
Haddii ay wax qori karaan oo ay heli karaan intarneedka, u soo dir xiriir maqaalkan si ay isugu diyaariyaan xaaladaha sidan oo kale ah.
15 siyaabood oo lacag lagu helo inta lagu jiro hoos u dhac dhaqaale
Inta lagu jiro fasaxyada, ka -hortagga uur -qaadidda ayaa soo jeedinaysa inaad fiicnaato marka arrimuhu sii xumaadaan. Lacag samaynta inta lagu jiro hoos u dhac dhaqaale waa hab fiican oo taas loo maro. Halkan waxaa ah 15 siyaabood oo lacag lagu helo inta lagu jiro hoos u dhac dhaqaale;
#1 - Iibi waxyaabaha aan la rabin
Tani waxay u ekaan kartaa wax ay tahay inaad ogaato, laakiin waa muhiim inaad maskaxda ku hayso. Inta lagu jiro hoos u dhac dhaqaale, waa inaad iska jartaa wax kasta oo aan qiimo badan kuugu kordhin mar labaad, ama waxyaalaha aad u malaynayso inaad dhaaftay.
Waxyaalahaas oo aadan mar dambe u baahnayn waa waxyaabo ay kuwa kale jeclaan lahaayeen inay haystaan. Iibi iyaga oo iska soo celi xoogaa lacag ah.
#2 - Hayso shaqadaada
Xilliga hoos u dhaca dhaqaale, waa muhiim inaadan lumin waxa jeebkaaga ku rida lacag. Shaqadaadu waa aasaaska waana inaad hubisaa inaad ilaaliso. Waxaad xitaa soo bandhigi kartaa inaad wax badan qabato oo aad caawiso agagaarkaaga. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad ku sii haysato shaqo marka dadka kale la sii daayo.
#3 - U gudub habka badbaadada
Inta lagu jiro hoos u dhac dhaqaale, maskaxdaadu waxay u baahan tahay inay is beddesho, samaynta lacagtu halkaas bay ka bilaabataa. Hadda si ka badan sidii hore waa marka aad u baahan tahay inaad qaadato mabda'a ah "kharash yar, kasso wax badan."
Ka hor inta aysan arrimuhu mugdi-madoow ka soo bixin, waxaad u baahan tahay inaad hesho hab aad ku dhaqaajiso maskaxdaada iyo tan jeebkaaga si aad wax u ogaato inaysan mar kale isku mid ahayn.
#4 - Samee wax badan
Daacadnimo, waxaad u baahan tahay wax badan. Tani waa waqtiga aad u baahan tahay lacagtaas dheeraadka ah ee aad inta badan iska indho tirtay. Markay dalabyadu yimaadaan, soo qaado kuwa aan ku soo xadgudbin wakhtiga aad ku qaadato shaqadaada ugu weyn oo ka shaqee.
In badan oo aad samayso, ayaa sii kordheysa ogaanshaha inta karti u leh inaad lacag badan sameyso.
Ganacsi kasta ama dakhli dheeraad ah oo aad samaysid ayaa laga yaabaa inuu kugu dheggan yahay ama laga yaabo inuusan ku dhejin xitaa ka dib markii uu hoos -u -dhacu dhammaaday. Mid kasta oo aad doorato inaad samayso, ha ku degdegin. Ka feker caqli, dheer, oo adag ka hor intaadan sii wadin.
#5 - Keydso
Waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay sida. Waan ogahay. Kaliya ku hay dhabarka maskaxdaada in xitaa inta lagu jiro hoos u dhac dhaqaale, weli waad badbaadin kartaa. Wixii yar ee aad samaysid, badbaadi.
Dhammaan lacagta aad samayso waa inaysan gelin badbaadada. Sida ereyada caanka ah ee ku jira buug caan ah ayaa yiri, "boqolkiiba inta aad shaqaysato adiga ayaa iska leh." Xusuusnow taas.
#6 - Hoos u dhigista
Waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii la dhimi lahaa. Intaad yareyneyso kharashaadka oo aad iibiso waxyaabo aan la rabin, waxaa laga yaabaa inaad yareyso waxyaabaha guriga qaarkood oo aadan u baahnayn.
Waxyaabaha sida baabuurtaada, gurigaaga, booska xafiiska. Ma jiraan baabuur aadan u baahnayn laakiin u baahan in la dayactiro? waqtigan waa markii la iibin lahaa ama la kirayn lahaa dakhli ahaan. Haddii aad gurigaaga ku haysato boos ka badan intaad u baahan tahay laakiin weli ay tahay inaad bixiso, waxaa laga yaabaa inaad iibiso gurigaas oo aad hesho mid yar ama aad meeshaas ka baxdo oo aad kiraysato wax ka yar.
Miyaad leedahay meel xafiis oo ka badan intaad u baahan tahay inaad iska bixiso, tani waxay noqon kartaa waqtigii aad iska iibin lahayd booskaas oo aad heli lahayd wax ka yar ama aad u guurto meel yar oo kiro ah.
#7 - Beddel ama hagaaji koorsada
Haddii ishaada dakhliga lagu hanjabo oo laga yaabo inay dhowaan kaa tagto shaqo, maahan inaad noqoto dhibane si aad u barato waxa la sameeyo. Waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii koorsada la beddeli lahaa.
Waxaad go'aansan kartaa inaad baratid wax kale oo leh rajooyin faa'iido leh. Waxaa jira xirfado hadda baahi badan loo qabo ama meherado hadda gaadiid hela. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad fiiriso ganacsiga meherad kale.
#8 - Hore u sii qorshee
Si aad u noqoto mid aan dib-u-dhac lahayn waa in loo diyaar garoobo in aan dib loo noqon marka saamaynta hoos-u-dhacu ay bilawdo in ay aad qaniinto dadka. Sida Yuusufkii kitaabiga ahaa intii lagu jiray abaartii weyneyd ee Masar, oo horay u sii arkay macaluushii sannado ka hor, diyaargarow ku filanna u samaysay sannadahaas, si dib-u-noqosho-caddayn loogu noqdo sidii Yuusuf oo kale.
Gurigaaga, ku bilow inaad hoos u dhigto kharashaadka guriga, yareyso keydinta deg-degga ah adigoo kor u qaadaya, iibiya waxyaabo aadan u baahnayn, oo u diyaargarow inaad caawiso xubnaha qoyska ee aan u ahayn kuwa hoos u dhac dhaqaale.
#9 - Ka qaybgal qof walba
Ma jiraan kuwa qoyskaaga ka tirsan oo ku filan inay dakhli helaan? Ka qaybgal oo ka caawi iyaga inay arkaan muhiimada ay leedahay in madax la isu geeyo si loo helo natiijooyin sax ah.
Ka caawi inay fahmaan in ka qaybgalkoodu dan u yahay qoyska. Maahmaah Afrikaan ah ayaa tidhaahda “haddii aan dhammaanteen hal meel ku wada kaadinno, waa xumbo.” Ka saar taas, waxaad rabto.
#10 - Ha gelin dayn xun
Hoos -u -dhacu waa wakhti khaldan oo aad ku amaahato waxyaabo aadan u baahnayn. Sababta kaliya ee loo amaahan karo waa ganacsi la xaqiijiyay oo leh baahida loo qabo soo galinta lacag caddaan ah oo cusub si uu uga weynaado sida uu hadda yahay.
#11 - Kaydso canshuuraha
Lacagta dawladda ha jabin, haddii aan daruuri ahayn. Wax kasta oo kaa caawin kara inaad sii haysato lacag badan oo aad bixiso sida canshuurta waa in la raaco, ka -reebitaan mooyee. Raadi hab lagu yareeyo cadadka aad canshuurta ku bixisid dakhligaaga, gurigaaga, baabuurkaaga, iyo wax kasta oo kale oo aad ka fikiri karto.
#12 - Maalgasho
Tani waa waqtigii la maalgashan lahaa. Waxaa jira wax badan oo laga dhihi karo arrintan, sidaan hore u sharxay, suuqa hoos -u -dhaca wuxuu ku jiraa jahawareer. Ka dib markaad si fiican oo adag uga fiirsato waxaad samaynayso, tani waxay noqon kartaa waqtigii ku habboonaa ee aad ku iibsan lahayd kaydkaas iibiyay oo diyaar u ah inay ku iibsadaan raqiis.
Tani waxay u baahan tahay inaad isweydiiso nooca maalgaliye ee aad rabto iyo heerka dulqaadka halistaadu yahay. Mid kasta oo aad go'aansato inaad samayso, ku maal -geli diiradda.
Inta aad maalgelinayso suuqa saamiyada, naftaada sidoo kale u maal.
#13 - Tag dareere
Hoos -u -dhac dhaqaale ayaa laga yaabaa inaanay ahayn waqtigii ku habboonaa inaad lacag kaga tagto bangiyada ama gacanta dad aan laga yaabo inaad ka soo ururiso. Lacag caddaan ah ayaa kugu haysa marka doonyuhu quusayaan. Qaado lacag caddaan ah, maadaama ay tani xaqiijinayso in aad aad uga badbaado guuldarooyinka nidaamsan marka loo eego kuwa aan haysan lacag caddaan ah.
#14 - Iibso
Hoos -u -dhacu wuxuu kaloo noqon karaa wakhti ku habboon in la iibsado qaar ka mid ah meheradaha yaryar ee kale ee halista ugu jira in la xiro. Iibsashada meheradaha cusub iyo ku shubista lacag caddaan ah meheradahaas waxay noqon kartaa waxa loo baahan yahay si loo ilaaliyo ganacsiga iyo milkiilayaashii hore. Habkaas, waxaad badbaadinaysaa nafo, ganacsiyo wanaagsan, lacagna waad ku samayn kartaa hal mar.
#15 - Qaado fasax / Hawlgab
Ahaa. Miyaad dib u dhigtay fasaxaaga sanado badan? Ma waxaad ka mid tahay kuwa aan qaadan nasashooyinka? Waxaa laga yaabaa inaadan ogaanin laakiin waxaad u baahan kartaa inaad mid qaadato hadda. Qaado nasasho si aad u barato wax kor u qaadaya ama aad nasato oo nolosha ka yaabto.
Hawlgabku sidoo kale waa ikhtiyaar. Hawlgeli oo gurigaaga u tag naftaada, xaaskaaga, iyo carruurtaada. Waxaa laga yaabaa inaad ku jirto da'da aanad mar dambe samayn karin waxyaalihii aad hore u samayn jirtay. Kaliya guriga tag oo naso. Ha jabin isku dayga inaad jebiso diiwaankaaga. Nolosha caafimaad qabta waa nolol hodan ah.
Had iyo jeer waxaa jira war wanaagsan. Wanaagsanow. Hoos -u -dhac dhaqaale, ama ha ahaato, noqo mid wanaagsan. Dib -u -dhacu ma aha dhammaadka. Maqaalkan oo ku saabsan sida lacag loo sameeyo inta lagu jiro hoos u dhac dhaqaale ayaa laga yaabaa inuusan daboolin dhammaan waxaad rabto inaad weydiiso, laakiin waxay ku baraysaa wax badan oo ay tahay inaad ogaato.
Waqtiga ugu Wanaagsan Sanadka si loo Iibsado TV Cusub
Ganacsiyada Caddaynta Hoos -u -dhaca ee 15 | Saadaasha Khabiirka
25 Kaydka Chip -ka Ugu Fiican Si Loo Iibsado 2022 -ka
10 Qorshayaasha Caymiska Taleefoonka Gacanta ugu Fiican 2022 -ka
Halkii ay ka mari lahaayeen dhibaatada xulashada kaar si gaar ah loogu abuuray ganacsiga, milkiilayaasha meheraddu had iyo jeer waa…
Sidee Yelp Lacag U Samaysaa | 2022 Qaab Ganacsi Buuxa
Sanadihii la soo dhaafay, ganacsiyada yaryar waxay la halgami karaan oo kaliya inay helaan soo-gaadhsiin, laakiin maanta, Yelp ayaa ka dhigtay ...